बाल कथा : वर्णहरूको झगडा ।। (माधव प्रसाद उपाध्याय ‘सयपत्री’)
अनशनरत डाक्टर गोविन्द केसीको समर्थनमा कैलालीको धनगढीमा शान्तिपूर्ण प्रदर्शन ।।
कञ्चनपुरको बेलडांडी गाउँपालिकामा आयोजित आधारभूत तह स्तरीय अध्यक्ष कप सम्पन्न ।।
कञ्चनपुरको पुनर्वासमा प्याब्सन फेस्टिवल सुरु, १६ विद्यालय सहभागी ।।
नेकपा सुदूरपश्चिम प्रदेश कमिटी सदस्य गोकर्ण भट्ट ‘देशभक्त गणतान्त्रिक सम्मान’बाट सम्मानित ।।
एउटा किताबमा स्वरवर्ण समूह र व्यञ्जनवर्ण समूहका अक्षरहरू बस्थे । तिनीहरूले बोली र लेखाइमा कब्जा जमाएका थिए । दुवै समूहलाई आˆनो समूह महìवपूर्ण छ भन्ने ठूलो घमण्ड थियो । तिनीहरू सधैँ झगडा गरिरहन्थे तर सँगै जोडिएर बस्नुपर्ने बाध्यता थियो । कुकुर र बिरालाजस्ता एकछिन नमिल्ने तर सँगै बस्नुपर्ने । सँगै बस्दा लात्ती त लाग्छ नै । लात्ती त के मन नपरेकाको सास पनि गनाउँछ भनेझैँ तिनीहरू एकअर्कालाई आफूबाट टाढा राख्न खोज्थे । चाहेर मात्र के हुन्थ्यो र ? तिनीहरूको त लगनगाँठो नै कसिएको थियो । त्यसले छुट्टनिै दिँदैनथ्यो । सधैँ झगडा गरेर एकै ठाउँ बस्नुभन्दा छुट्टनिु बेस ठानी तिनीहरू तर्क गर्न लागे ।
स्वर समूहको अगुवाइ ‘अ’ ले गथ्र्यो भने व्यञ्जनको ‘क’ले । ‘अ’ले भन्यो- “हेर ‘क’ ! अब हामी तिमीहरूको थिचोमिचोमा बस्न सक्दैनौँ । कि बराबरीको सिद्धान्तअनुसार हाम्रो अधिकार तोकियोस् नत्र भने हामी छुट्टन्िछौँ । तिमीहरू नभए पनि हामी बोलिन सक्छौँ । मानिसलाई बोलाइ र लेखाइ दिन सक्छौँ । तिमीहरूको समूहको बैठकमा छलफलको विषय बनाऊ । म पनि केन्द्रीय समितिको मिटिङ राख्छु । समितिले वार्ता गर्नुपर्छ भन्यो भने गरौँ । त्यसो नभएमा हामी तिमीहरूको हैकम सहेर बस्न सक्दैनौँ । चाँडै पुनर्विचार गरी हामीलाई तिमीहरूको राय देओ ।”
व्यञ्जनवर्णको नेता ‘क’ले ‘अ’को प्रस्तावको उत्तर दियो- “स्वरको नेता भएर जे मन लाग्यो त्यही नबोल है ‘अ’ । तिमीहरू, सङ्ख्यामा हाम्रोभन्दा आधाभन्दा पनि कम छौ । समानुपातको आधारमा तिमीहरूको र हाम्रो बण्डापत्र हुन सक्दैन । सय भाइ कौरव र पाँच भाइ पाण्डव जस्तो । कौरवहरूले जोरी खोज्दा के भयो ? त्यो त पढेकै हौला । चुप लागेर आˆनो थान्कोमा बस । हामी तिमीहरूलाई शब्दराज्यको हजार भागको एक भाग पनि दिन तयार छैनौँ । बरु लडाइँ गर्छौ भने हामी तयार छौँ ।”
‘अ’ लाई जङ चल्यो । उसले लडाइँको त कल्पना पनि गरेको थिएन । ‘क’ को चेतावनीले ‘अ’ को रगत तातेर आयो । उसले भन्यो- “तिमीले के भन्न खोजेको ? गुणको मूल्याङ्कन कि सङ्ख्याको ? तिमीहरूसँग छत्तीस सङ्ख्या छ, बहुमत छ भन्दैमा हामी बाह्रको सुनुवाइ कतै नहुने ? केही नलागे हामी अदालत जान्छौँ । मुद्दा लड्छाँै ।”
‘क’ले गर्जेर भन्यो- “जहाँ जानुपर्छ जाओ । तिमीहरूले केही लछारपाटो लाउँदैनौँ । अदालत जाने दुःसाहस गर्‍यौ भने उहाँ अदालतकै ढोकामा मुक्का खान्छौ । जाबो बाह्रले छत्तीससँग निहुँ खोजेर टेक गर्न सक्छौ ? कमजोर भएपछि केही धन्चमन्च त सहनै पर्छ नि ।”
‘अ’ले भन्यो- “हामी सहँदैनौँ । कामचाहिँ हामीले धेरै गर्नुपर्ने फेरि अधिकार चाहिँ कटौती गर्ने ! हामीलाई साथ नलिइकन तिमी आˆनो नाम भन त !” ‘क’ले भन्यो- “हैन, के नचाँहिने फुर्ती लडाएको । म मेरो नाम पनि भन्न सक्दिन रे ! ल, ‘क’ हो मेरो नाम ।”
‘अ’ ले उदाहरण पेस गर्‍यो- “क्+अÖक, यसरी बन्छ तिम्रो नाम । तिम्रा छत्तीस जवानहरूको नाम म ‘अ’ नभई बन्दै बन्दैन अधुरो बन्छ । अलि सोचेर बोल ‘क’ । कसको खुट्टामा टेकेर हिँडेका छौ !”
आˆना नेताहरूको छलफल सुनेर दुवै वर्गका अरू सदस्यहरू जम्मा भए । एकातिर बाह्र, अर्कोतिर छत्तीस । तीनदोब्बर बढी ‘क’ लाई अरू जवानहरूले सोधे- “तपाईंहरूको झगडा परेजस्तो छ । के भयो हँ ?” ‘क’ ले भन्यो- “हेर न साथी हो, ‘अ’ को फुर्ती । आफैँ ठूलो रे ! भागबण्डा गर्दा बराबरी हुनुपर्छ रे ! यत्रो ठूलो सङ्ख्याको फरक हुँदाहुँदै पनि कसरी बराबरी हुन्छ ? लडाइँ गरौँ कसले जित्छ उसैले भाषालाई शासन गर्छ । मैले यसै भनेको हुँ ।” ‘क’ का साथीले निकै ठाडा कान पारे । लड्ने भए लडौँ भने ।
‘अ’ परिवार शान्त थियो । उनीहरूसँग बुद्धि र विवेक थियो । त्यसैले लड्ने कुरामा नाइनास्ती गरे । “साथी हो ! हामी एउटै घरका जहानपरिवार लडेर कसलाई रमिता देखाउनु छ र ! एउटा कुरा चाहिँ विचार गर । काम हामीले बढी गरिरहेका छौँ । तिमीहरू प्रत्येकको नाममा हाम्रो ‘अ’ले साथ नदिए तिमीहरू बोलिँदैनौँ ।”
‘क’ परिवारले कम्मर कस्यो- “हैन, के भनेको हो यो अड्बाङ्गेको सन्तानले ? एकै मुक्कामा डिलमुनि पठाइदिउँ कि क्या हो । उनीहरू नभए हाम्रो नाम बन्दैन रे ! कसरी बन्दैन ? ‘क’ को हातखुट्टा, टाउको, सबै ईः क का कि की कु कू……।”
‘आ’ तम्सियो- म नभए तिम्रो ‘काका’ बनाऊ त ।”
‘क’ कड्कियो- “के, बनाउन सक्दिन रे ! ल ‘काका’ ।
‘आ’ ले खिसी गर्‍यो- “खेब बनायौ, हेर यहाँ, क्+आ+क्+आÖ’काका’ । मेरो बुइर्ँ नचढे दुईपाइला हिँड्न सक्दैनौँ । फुर्ती लगाउँछौ । बरु तिमीहरू नभए पनि हाम्रो नाम बन्छ । ल सुन- ‘अ, आ इ ई…”
व्यञ्जन परिवारलाई बहुतै रिस उठ्यो- “हामीसित टाँसिएर बस्नु पर्दै पर्दैन । छुट्टएि हुन्छ । तर हामी अंश दिँदैनौँ । एक, दुई, तीन दिदैनौँ ।”
स्वर परिवारले कौरवजस्ता दुष्ट व्यञ्जन परिवारसँग नबस्ने निधो गरे । आˆनो वर्गको गोप्य कोठामा गोप्य सल्लाह गरे । विरक्त भएर अन्तै बसाइँ सर्ने भए । ‘अ’ हिँड्यो । ‘क’ ‘ख’ ‘ग’ …..’ज्ञ’ एकखुट्टे भए । भुइँमा बङ्ल्याङ्ग पछारिए । ‘आ’ हिँड्यो । ‘का’ ‘खा’ ‘गा’……’ज्ञा’ लडे । ‘इ’ हिँड्यो । ‘कि’ ‘खि’ ‘गि’ उत्तान्टाङ् परे ।
व्यञ्जन वर्णको ‘क’ लाई पछुतो भएछ । इशाराले ‘अ’लाई सङ्केतले बोलायो । ‘अ’ परिवार फर्कियो । ‘क’ परिवार सबै लडेको देखेर माया लागेछ । नजिकै आए । ‘अ’ अर्थात् स्वर परिवार व्यञ्जन परिवार भएको ठाउँमा आउने बित्तिकै अकस्मात् व्यञ्जन परिवारतिर तानिए । एकअर्कालाई चुम्बकले तानेझैँ ताने । सुलोसनले जोडेझैँ जोडिए ।
अन्त्यमा दुवै वर्गले महसुस गरे- ‘ओ हो ! हामी कति पटमूर्ख भएछौँ । एउटा वर्ग नभए अर्को वर्गको अस्तित्व नहुने रहेछ । अब दुवै परिवार मिलेर एक परिवार भई बस्नुपर्छ । मानिसलाई मीठामीठा स्वर-व्यञ्जन परिकार (खाना) दिनुपर्छ ।’ उनीहरूले एकएक गरी हात मिलाएर बसे । त्यो समयदेखि ती दुई वर्गहरूबीच कहिल्यै झगडा भएन ।